Warqada Muddada Tacliinta: Kireyso khadka tooska ah Qorahaaga Qormo ee Soomaaliya
Warqadda Muddada Tacliinta ee Soomaaliya si loogu guuleysto natiijooyinka laba jeer ka dhakhso badan!
Qorayaal aqoonyahano aqoon leh iyo 24/7/365 taageero, ayaa hadda laga heli karaa Soomaaliya! Waxaan bixinnaa adeegyo Warqad Muddo Tacliineed ah oo aan daryeelayno waqtigaaga iyo asturnaantaada
Waraaqaha Muddada Tacliinta - Ogow waxa Adeegyada Qorista ee ugu Fiican ay Bixiyaan
Waxaa jira ilo badan oo aad ka iibsan karto warqad xilliyeed khadka tooska ah. Kuwaas waxaa ka mid ah kulleejooyin, jaamacado, iyo ganacsiyada qaarkood. Faa'iidada ugu weyn ayaa ah inaad baari karto dhowr bixiyeyaal kala duwan si aad uhesho heerka ugu fiican. Waqtiga dheer, tani waxay ka dhaqaale badnaan doontaa inaad iibsato hal ama laba buugaag waxbarasho oo ka socda dukaamada buugaagta xerada. Waxaad sidoo kale badbaadin doontaa lacag haddii aad ka iibsato buugaag badan oo aqoonyahanno ah hal adeeg bixiye - xitaa waxay ku siin karaan qiimo dhimis iibsiyo badan. Si aan uga iibsano waraaqaha ereyga tacliimeed adeeg bixiye kasta oo khadka tooska ah ku jira, waxaan ku soo darnay qaar ka mid ah waraaqaha tusaalaha ah xagga hoose.
Waraaqaha cilmi baarista tacliinta - habka ugu fudud ee waraaqahaas looga iibsado waa adeeg bixiye bixiya iibsashada badan. Qormooyinka kulleejyada badankood waxaa loo qoraa iibsasho deg deg ah, markaa ereyga 'iibsiga badan.' Qoraalada kulleej ee ugufiican - waaya aragnimada ugu raaxada badan ee lagahelo khibrada qorista qormada, qor qorida iibsiga jumlada. Waraaqaha noocan ah badanaa waxay ka kooban yihiin qormooyin fara badan waxaana loo abaabuli doonaa iyadoo loo eegayo mowduuca, magaca qoraaga, cinwaanka, iyo xitaa heerka fasalka.
Adeegga aan u adeegsan doonno si aan ugu soo iibsanno qormooyinka tacliinta waxaa loo yaqaan 'E-course', oo ah bogga adeegga qorista qorista oo ku qaata qiime hooseeya halkii shaqo. Qormooyinka aad halkan ku iibsanayso waxay noqon doonaan kuwo tayo sare leh maadaama ay qoreen bare sare. Shaqada ugu caamsan waa kuwa ku saleysan mashruuca oo ku lug leh mashruucyo waaweyn oo kooxeed ah iyo qormooyinka ku saleysan mashruuca badanaa waxay ku dhammaadaan warbixin meeleyn ah. Tani waxay fursad wanaagsan u tahay ardayda inay ku bartaan qorista qormada ee ku saleysan mashruuca.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka qorista waraaqda dalabka badan ayaa ah inay u oggolaato ardayda inay doortaan mowduucyada waraaqaha, oo aysan kaliya ahayn mowduuca laftiisa. Tusaale ahaan, markaad raadineyso mowduucyada maqaalka, waxaad si fudud u dooran kartaa illaa saddex ama afar eray oo tacliimeed, oo ma aha mowduuca laftiisa. Kaliya waa inaad ka baaraandegtaa mowduuca ku habboon. Waxaa jira talooyin badan oo ay tahay inay ardaydu xusuustaan ​​markay qorayaan hawsha. Waa inay hubiyaan inay haystaan ​​dhammaan shuruudaha loo diyaariyey ka hor intaysan bilaabin shaqadooda, waana inay si fiican u akhriyaan warqaddooda si loo hubiyo inay si fiican u fahmeen.
Waxa kale ee ay tahay inay qorayaashu xusuustaan ​​ayaa ah inay tahay inay ka dhex akhriyaan warqaddooda markay dhammaystiraan si loo hubiyo khaladaadka jira. Akhrinta warqadda mar alla markii la qoro oo la tifaftiro waxay ka caawineysaa qorayaasha inay aad u bartaan qaabka qoraalka. Waxay kaloo ka caawinaysaa qorayaasha inay go’aamiyaan higgaadda iyo naxwaha saxda ah. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa warqad kasta oo dib-u-eegis suugaaneed ah, taas oo ka soo horjeedda meelaynta halka qoraagu ku samaynayo dib-u-eegista suugaanta.
Si aad uga iibsato waraaqaha tacliinta tooska ah, waxaad u baahan doontaa inaad hesho adeeg qoraal ku habboon. Waxaa jira adeegyo badan oo noocan oo kale ah oo laga helo internetka oo qaarkoodna ay ka fiican yihiin kuwa kale. Waxaa jira boggaga adeeg bixinta ereyada tacliinta oo bixiya adeegyo qoraal oo raqiis ah laakiin qorayaasha aad la shaqeysid waxaa laga yaabaa inaysan karti badan lahayn. Haddii aad rabto wax soo saar tayo leh, waa inaad had iyo jeer isku daydaa inaad ka iibsato waraaqahaaga tacliimeed shirkadaha aasaasiga ah ee taariikhda ku leh bixinta alaabada tayada sare leh. Tusaalaha wanaagsan ee shirkadaha noocaas ah waxay noqon doonaan Waraaqaha Northwest.
Shirkadaha qaar waxay macaamiishooda u fidiyaan qoraalo maqaal ah oo jaban, halka kuwa kale ay bixiyaan adeegyo dheeri ah sida dib u akhrinta iyo tafatirka Tani waa arrin aad muhiim u ah maxaa yeelay qayb weyn oo ka mid ah shaqada tacliimeed waxay noqon kartaa lacag badan haddii si liidata loo qoro. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato inta aad rabto inaad ku bixiso qorayaasha curiska. Markaad baareyso adeegga qorista warqadda, fiiri liiska qiimaha sidoo kalena tixgeli tayada qorayaasha dhammayn doona hawshaada. Mararka qaar, waxay bixisaa inay la socoto shirkad yar oo kaliya bixisa dhinacyo gaar ah oo ku saabsan adeegga qorista qormada halkii ay ka ahaan lahayd shirkad weyn oo bixisa adeegyo badan oo kala duwan. Sidoo kale, waxay bixinaysaa in la doorto degel aad kula xiriiri karto qorayaasha kale halkii aad ka heli lahayd goob aad kula xiriiri karto oo keliya qoraaga.
Qaybta ugu muhiimsan ee qorista tacliinta ayaa ah waqti ku filan oo lagu qaato mid kasta oo ka mid ah qormooyinka. Inta badan ardayda waxay waqti badan ku qaataan sixitaanka dhibaatooyinkooda inta aysan bilaabin qoritaanka waraaqaha laftooda, taas oo macnaheedu noqon karo waqti lumis adiga. Had iyo jeer xusuusnow in qormadu ay tahay waxa ku kasbanaya dhibcahaaga, oo haddii aadan kaligaa qori karin qormada, markaa waxay u badan tahay inay fiican tahay inaad shaqaaleeysid qof xirfadle ah oo shaqada kuu dhammaystira. Haddii aad qaadaneyso koorso, hubi inaad waqti dheeri ah ku qaadatid sidii lagu heli lahaa warqad heer sare ah oo la soo saaray, haddii kale, waxaa laga yaabaa inaadan haysan waqti kugu filan oo aad ku daryeesho waxbarashadaada.